Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Waxyaabaha Dumarku Sameeyaan Ee Sababa In Raggu Ay Ka Cararaan
Dumarka qaarkood waxay si dhaqsi ah ku waayaan ninka marka uu xiriirku bilaawdo ama maba dhacdo in raggu ay guur u ballan qaadaan.
Waxyaabo badan oo haweenku sameeyaan waxay cabsi gelin karaan ninka, taas oo ku riixaysa inuu sameeyo laba go’aan – waxaa laga yaabaa inuu si deg deg ah uga tago xiriirka ama uusan waligiis u go’in xiriirkaas.
Ha u maleynin inaad inkaaran tahay ama aanad soo jiidan karin sababta aadan ragga u haysan karin; waxaa jira waxyaabo badan oo haweenku si joogto ah u sameeyaan oo cabsi geliya kana fogeeya ninka.
Dumar badan ayaa iska fogeeya ninka iyagoo ku deg dega ballanqaad ama guur. Markii aad bilowdo inaad ka hadasho guur ama inaad weydiisato inuu la kulmo waalidiintaada iyadoo xiriirku hadda bilaawday ama uu cusubyahay, waxay u badantahay inaad iska fogeyso ninka.
Guurku waa mid ragga badankood heshiis weyn ku ah; maahan waxa rag badani ku degdegi lahaayeen – ku deg degida guurka ayaa laga yaabaa inay keento inuu durba kaa cararo.
Deg dega ayaanan sidoo kale adiga kuu wanaagsaneyn. Waxaa jiraan Maahmaahyo guurka ah oo Soomaalidu ay isticmaalaan waxaana kamida “Geedkii orod lagu koro orod ayaa looga soo dagaa,”.
2. Iska bedelida sidaad ahayd
Tani waa qalad kale oo haween badani sameeyaan taas oo keenta in ragga ay ka baqaan. Dumarka badankood way yaqaanaan sida loo noqdo qof macaan oo jaceyl leh marka uu xiriirku bilowdo, laakiin dib ayay iska bedelaan. Tani dhab ahaantii waxay cabsi gelineysaa ragga iyadoo keeneysa in ninku kaa cararo.
Ha iska dhigin qof macaan oo cajiiba si aad u hesho nin kaliya kadibna ha isbedelin oo haku noqon sidaadi hore; haddii aad sameyso sidaas waxaad ogaataa inaad adiga uun iska fogeyneysid ninka.
3. Masayr badan oo micno la’aan ah
Masayrku waa astaamo kale oo haweenku leeyihiin oo si fudud ragga uga fogeyn kara. Inaad noqoto qof la timaada Masayr aanan micno lahayn waxay kaliya muujinaysaa inaad tahay qof aan kalsooni qabin oo aan ku kalsoonayn ninka ay xiriirka la leedahay.
Tani kaliya kuuma ekeyn karto inaad tahay qof aan soo jiidasho laheyn, laakiin waxay u badan tahay inaad lasoo baxdo dabeecado cabsi leh sida inaad noqoto qof amar badan haddii aad tahay nooca masayrka badan.
Nin kastaa ma xamili karo inuu la joogo haweeney lacag uun ujeedadeedu tahay. Haweeneyda noocaas ah ayaa daneyneysa kaliya lacagta ninka.
Lacag inaad weydiiso ninka xiriirka oo cusub waa mid kamid ah waxyaabaha keena in ninku ka cararo haweeneyda xittaa haddii aysan haweeneyda ka ahayn daneysi oo baahi gaar ah ay u geyso wuxuu u arkayaa haweeneyda inay lacag uun dooneyso oo ujeedadeedu tahay lacag.